मलेसियामा ९ नेपाली सहित ३१ विदेशी नागरिक पक्राउ, के थियो कारण ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा ९ नेपाली सहित ३१ विदेशी नागरिक पक्राउ, के थियो कारण ?
शाहआलमको तमनश्री मुडामा रहेको सुपरमार्केट तो’डफोडमा संलग्न रहेको आशं’कामा हिजो ३१ जना प”क्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका सबै विदेशी रहेको शाहआलमका जिल्ला प्रहरी प्रमुख बाहरुद्दिन मत तैबले बताए ।
“पक्राउ परेका सं”दिग्धहरूमा १० इन्डोनेसियाली, सात बंगलादेशी, नौ नेपाली र पाँच म्यानमारका नागरिक थिए। “द”ण्ड संहिताको धारा ४५७ अन्तर्गत मु”द्दाको अनुसन्धान गरिनेछ,” उनले सिनार हरियानको रिपोर्ट अनुसार भने।
हिजो, ११ सेकेन्डको भिडियो क्लिपमा व्यक्तिहरूको समूहले शाह आलमका धेरै सुविधा पसलहरूमा तो”डफोड गरेको देखाइएको थियो। विक्की अधिकारी हिजो, गत शुक्रबारको बाढीले प्रभावित क्षेत्रका धेरै सुविधा स्टोरहरू हिजो भ”त्किएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
आज दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म श्रीमुडा, विशेषगरी खण्ड १५ वरपर घटना भएको बाहरुद्दिनले बताए । उनले भने, ‘सहयोगी पसलहरूमा माइडिन, केके मार्ट, ७ इलेभेन र पसाराया जिमात समावेश छन्।
म्यानमारको जेड खानीमा पहिरो : ७० जना हराए
उत्तरी म्यानमारमा एक जेड माइनिङ ( मूल्यवान् पत्थरको खानी) मा आएको पहिरो गएको छ । यसमा कम्तीमा ७० जना गायब भएका छन् ।​ कचिन राज्यको हपाकान्त इलाकामा बुधबार स्थानिय समयानुसार बिहान ४ बजे पहिरो गएको हो ।
घटनास्थलमा उद्दारकार्य जारी छ पीडिडमध्ये धेरैजसोले अवैध रुपमा जेडको उत्खनन गरिरहेका थिए । म्यानमार जेड (गहना बनाउन प्रयोग हुने हरियो पत्थर) को संसारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो तर पछिल्ला थुप्रै वर्षमा यसको उत्खननका बेला थुप्रै दुर्घटना भएका छन् ।
हपाकान्तमा जेड उत्खननमाथि प्रतिबन्ध छ तर स्थानीय रोजगारीको कमी र कोभिड–१९ पछि खराब भएको आर्थिक स्थितिका कारण उत्खनन गर्दै आएका छन् । केही दिन अघि हपाकान्तमा एउटा जेड ब्लक नजिकै पहिरो गएका कारण १० जना गायब भएका थिए ।
सन् २०२० मा हपाकान्तमा नै एक दुर्घटना हुँदा १६० भन्दा बढी मारिएका थिए जसमा धेरैजसो प्रवासी थिए । यो दुर्घटना उत्खनन गरिएको फोहोरको पोखरीमा डुबेका कारण भएको थियो ।
सन् २०१८ मा रत्न उत्खनन बारे नयाँ कानुन पास गरिएको थियो तर आलोचकका अनुसार सरकारसँग अनुसन्धानकर्ता छैनन् र अवैध काम रोक्नका लागि सिमित अधिकार छन् ।
म्यान्मारको जेडको व्यापार हरेक वर्ष ३० अर्ब डलरको मानिन्छ जसमा हपाकान्त संसारको सबैभन्दा ठूलो जेड उत्खनन हुने स्थान हो ।